« Hiragasy makotrokotroka »: hivoaka ny Renivohitra | NewsMada
« Hiragasy makotrokotroka »: hivoaka ny Renivohitra
Hetsika iray misongadina sy efa mahazatra ny maro, indrindra ny eto an-dRenivohitra, mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra, ny « Hiragasy makotrokotroka ». Nampanantena ny mpikarakara, ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga (Ortana), fa hitohy izany ho fanomezan-kasina ity zavakanto malagasy ity sy ho fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany eto amin’ny faritra.
Hiavaka amin’ireo andiany efa nifanesy ny « Hiragasy makotrokotroka », manomboka izao. Tsy hijanona eto afovoan-tanàna intsony ny adin-kiragasy. Araka ny fanazavan’ny mpikarakara hatrany, ny lanonam-panokafana sy ny adin-kiragasy dingan’ny famaranana ihany ny eto. Ny ambiny kosa, hatao any Alarobia Ambatomanga sy eny Ambohimanga ary any Alasora.
Tsy vitsy ny mpankafy hiragasy ary maro koa ny tanora tokony hampahafantarina ny hakanton’ity vakoka ity. Ny hanomezana fahafaham-po ireo sokajin’olona rehetra ireo no antony nanaparitahana ny hetsika any amin’ny manodidina ny Renivohitra.
Hosantarina amim-pomba ofisialy, ny alahady tolakandro izao, ny « Hiragasy makotrokotroka ». Raha tsiahivina, tontosaina isaky ny alahady tolakandro ny fifanandrinana. Hatramin’izay, nanomboka ny volana jolay ary tsy nifarana raha tsy oktobra ny adin-kiragasy. Izany hoe, nahatratra 22 ny tarika nandray anjara. Amin’ity andiany ity, hifarana ny 9 septambra ny « Hiragasy makotrokotroka », izany hoe, nihavitsy kokoa ny adin-kiragasy ary lasa 10 ny isan’ny tarika mpandray anjara.
Na izany aza, hangotraka toy ny niainan’ny mpankafy, hatramin’izay, ny « fifandonana » tsirairay ary tsy maintsy hisy ny mpandresy, hosafidin’ny mpijery sy ny mpikarakara.